Xinhua Myanmar - အီရန်နိုင်ငံ သမ္မတက နျူကလီးယားလက်နက်များကို ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်မရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြား
အီရန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဟတ်ဆန်ရိုဟာနီအား တီဟီရန်မြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၇ ရက်က ပြုလုပ်သော လွှတ်တော်အသစ် အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
“ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်မှာ နျူကလီးယားလက်နက်တွေ အပါအဝင် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးစေတဲ့ လက်နက်အတွက် နေရာမရှိပါဘူး။ ပြီးနောက် ဒါဟာ စနစ်ရဲ့ တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ” ဟု တီဟီရန်တွင် ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ပြီးနောက် ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ် သို့မဟုတ် မကြာသေးမီက ချမှတ်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခေါင်းဆောင်ကြီး Ayatollah Seyyed Ali Khamenei နှင့် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani တို့ကလည်း အီရန်အနေဖြင့် နျူကလီးယား လက်နက်များ လုပ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးကတည်းက အလေးထားပြောထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုဟာနီက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း အီရန်နိုင်ငံသည် နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) အဖွဲ့ဝင်နှင့် နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) သဘောတူညီချက်ကို စောင့်ထိန်းရန် သဘောတူလက်မှတ်တွင် ပါဝင်ရေးထိုးထားသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ “နျူကလီးယား နည်းပညာများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ” ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တီဟီရန်အနေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ၆ နိုင်ငံကြား အကျေအလည်ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က သဘောတူထားခဲ့သည့် ပူးတွဲအရေးယူလုပ်ဆောင်ရေးအစီအစဉ် (JCPOA) တွင် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျိုးမှ လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း အီရန် သမ္မတက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ပါလီမန်က ခွင့်ပြုခဲ့သော တန်ပြန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု မဟာဗျူဟာမြောက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ယူရေနီယံ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီလက ကြေညာခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်က JCPOA မှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အီရန်သည် သဘောတူစာချုပ်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-02-17 20:03:40|Editor: huaxia
TEHRAN, Feb. 17 (Xinhua) -- Iran's President Hassan Rouhani reiterated on Wednesday the Islamic Republic's "definite" determination not to produce or store weapons of mass destruction (WMDs), including nuclear weapons, official news agency IRNA reported.
"As we have said many times, in our country's defense program, there is no place for weapons of mass destruction, including nuclear weapons, and this isadefinite decision of the system," he said inacabinet meeting in Tehran.
Iran's president also reiterated that Tehran will not accept any changes in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreed in 2015 after intensive works between Iran and six world powers.
In response to the U.S. withdrawal from the JCPOA in 2018 and re-imposition of sanctions, Iran has suspended implementing parts of its obligations under the agreement. ■
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တော်၏ နေရာအတော်များများတွင် ရေးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပေါ်နေ
Next Article မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း)နာဂျစ်၏ ဇနီးအား အဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်များအပေါ် ခုခံချေပရန် အမိန့်ချ